Balwisana nokuhlukunyezwa | News24
ISITHOMBE : lethiwe makhanyaKungesikhathi kunombhikisho wokuhlukunyezwa kwabantu besifazane.
INHLANGANO yomama yeqembu elibusayo i-ANCWL esifundeni i-Moses Mabhida lithi lizokwenza noma yini ukulwisana nokuhlukunyewa kwabantu besifazane kanye nezingane.
Amalunga alenhlangano kanye namanye amalunga omphakathi, obekukhona kuwo nabantu besilisa, babe nombhikisho ngoLwesihlanu olwedlule mhla zili-13 kuMandulo (September) nalapho kade bezwakalisa khona ukukhathazeka kwabo ngokwanda kwezigameko zokudlwengulwa kuphinde kubulawe abantu besifazane kanye nezingane.
Usihlalo walenhlangano uNkk Zanele Ngcobo utshele i-Echo ukuthi bafuna ukudlulisa umyalezo kuzwelonke ngoba bakhathazekile. Uthe lo mkhankaso wabo awuqali manje kanti futhi awuzuphela manje.
“Sithi nje sekwanele manje sesikhulumile kwanele sabona kwanela kodwa sifuna ukuthi kuphele manje. Lo mkhankaso yinto esizoyenza kuze kuphele unyaka.
“Sifuna ukuthi uhulumeni wethu uyithathele phezulu lento asibuyekeze isigwebo esinikezelwa amadoda ahlukumeza aphinde abulale izingane kanye nabantu besifaznae. Uma kungukuthi kuthiwa asibuye isigwebo sentambo siyakweseka kakhulu loko,” kubeka yena.
Uthe abantu abahlukumeza izingane kanye nabantu besifazane bafuna babolele ejele bangaphumi ngisho nangoshwele.
Uthe bayafisa ukuthi abantu besilisa bakhulume ngezinto ezibadinayo nezingabaphethe kahle ngoba ekugcineni bagcina lokho kudinwa sebekukhiphela ezinganeni kanye nabantu besifazane. “Siyawadinga amadoda ekutheni nawo ame ngaphambili ngoba sidinga ukuthi bakhulise abafana emakhaya. Indoda ehlukumeza umuntu wesifazane iqale isakhula isesesikoleni ngokuthi ihlukumeze intombi yayo ngoba yazi ukuthi umuntu wesifazane uyashawa.
“Sifuna kube khona izinkundla [forums] zamadoda ezizohlela ziphinde zigqugquzelwe ithina abantu besifazane nalapho sizobe sithi khona amadoda awakhulise abafana babe amadoda aqotho, anakekela aphinde ahloniphe abantu besifazane,”kubeka yena.
UNkk Ngcobo uthe akuyekwe ukudlwengulwa kwabantu besifazane ngoba kuthiwa ubegqoke izimpahla emfishane okanye ngoba bahamba ebusuku. Uthe umuntu wesifazane unelungelo lokuba nesithunzi, ukuhamba ngesikhathi asithandayo emphakathini kanye nokugqoka ngendlela ayithandayo.
“Akuyekwe ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngenxa yobulili babo. Umshaya kanjani umuntu wesifazane ongenawo ngisho amandla okuthi azilwele.
“Sesimashile sazenza izinhlelo kodwa akukho okushintshayo. Ukuba nezinkundla zamadoda sicabanga ukuthi kuzosiza ngoba ilapho sizohlala phansi namadoda asichazele kahle ukuthi kungabe ilaphi inkinga nawo akwazi ukukhipha konke okukhona ngaphakathi kuwona.”